War Saxafadeed Goor Dhaweyd Ka Soo Baxay Xafiiska madaxweynaha Somaliland Md Muuse Biixi Cabdi ayaa waxaa lagaga hadley Shirka Somaliya maanta Uga Furmay Magaalada Brussels – All Hadaaftimo Warar Sugan o Run ah
War Saxafadeed Goor Dhaweyd Ka Soo Baxay Xafiiska madaxweynaha Somaliland Md Muuse Biixi Cabdi ayaa waxaa lagaga hadley Shirka Somaliya maanta Uga Furmay Magaalada Brussels
Allhadaaftimo July 16, 2018 Uncategorized
Halkan Hoose Ka Akhriso Warsaxafadeedka
Dabbaal-degga munaasibaddii 26-kii June 2018,
madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland iyo shir-guddoonka guurtida iyo wakiilladu waxay ku caddeeyeen in Somaliland diyaar u tahay xabbad joojin. Xukuumadda Somaliland waxay hore u aqbashay soo jeedinta Qaramada Midoobay iyo Beesha Caalamka ee xabbad joojinta Tuka-raq, Iyadoo dhulkeedii 70Km gudaha loogu jiro lagulana dagaallamayo xadkeeda.
Ergadii Garoowe tagtay waxay ahaayeen ergo iskood isugu xilqaamay xabbad-joojin, marti-qaadna ka helay dhiggooda Garoowe oo hore u yimi halkan.
Ciidamada Somaliland iyagoo ka duulaya deris wanaagga kana fogaanaya dhiig daata iyo ilaalinta doorka nabadda ayey dulqaad ku deggan yihiin Tuka-raq oo ah gudaha Jamhuuriyadda Somaliland daan-daansi iyo duullaanna may qaadin, xad dal kalena kuma socdaan.
Shirka Soomaaliya ku qabsatay Brussels, waa shir iyaga u gaar ah, mana quseeyo Jamhuuriyadda Somaliland, wuxuuna la mid yahay shirarka ay ku qabsadaan Muqdisho iyo Garoowe.
Dhawaan waxa madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi u gudbiyay golaha wakiillada xeerka doorashooyinka iyo diiwaan-gelinta cod-bixiyaha, kaas oo golaha wasiirradu ansixiyeen. Xeerkaasna waxa soo diyaariyey komishanka doorashooyinka qaranka iyadoo ay kala qayb-aateen axsaabta qaranka, garyaqaanka guud iyo ururrada bulshada rayidka ah.
Xeerkaas oo golaha wasiirradu ku sameeyeen kaabis iyo wax-ka-beddel ku salaysan qoondada haweenka iyo beelaha gabooye loo asteeyey, xeerkaas kuma qeexna, laguma kordhin, lagumana kaabin saami-qaybsiga kuraasida gobollada ee golaha wakiilada, waxana uu horyaallaa golaha wakiillada, si ay waajibaadkooda dastuuriga uga gutaan, doodda saami-qaybsiga kuraasta goboladda iyo qaabka qaybintiisuna xildhibaanada ka hadlay golaha ay ka tirsan yihiin ayey u taal.
Ugu danbayn madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi Marnaba ma soo jeedin in sidii hore lagu galo doorashooyinka golaha wakiillada, mana shaacin saami-qaybsiga kuraasida gobollada, xukuumaddana waxa ka go’an xaqiijinta geeddiga dimuquraaddiyadda ee doorashooyinka, waxaana xil ka saaran yahay qabsoomidda doorashada oo xilligeedii ku dhacda.
Previous Agaasimaha Nabadsugida Somalia oo mar shaqaddii ka wadda joojiyay labadisii ku xigeen
Next Qorayaal Caan Ah Oo Ka Hadlay Colaada Ceel Af Wayn Iyo Xalkeeda
Xog dheeri ah ayaa kasoo baxaysa arrimaha wada hadalada Soomaaliya iyo Somaliland iyo dedaalka dawladda Turkigu ku doonayso inay dib u bilowdo wada hadaladaas istaagay February 15, 2019
Wasiiradii ugu badnaa uguna tayada xumaa oo ka dhismay Puntland. February 15, 2019
AL SHABAB OO SHEEGTAY INAY WEERAR KU QAADEEN SALDHIGA BALI DOOGLE February 15, 2019
Dawaladda Somaliya Oo Sheegatay In Ay Soo Celinayso Hantida Shacbka Somaliland February 15, 2019
Beesha Yusuf Ali(Ugaadh) ee Ogayslabe oo maanta Ugaas ku caanashubtay February 14, 2019
Archives Select Month February 2019 (56) January 2019 (148) December 2018 (129) November 2018 (99) October 2018 (104) September 2018 (98) August 2018 (98) July 2018 (93) June 2018 (130) May 2018 (124) April 2018 (97) March 2018 (140) February 2018 (93) January 2018 (131) December 2017 (113) November 2017 (95) October 2017 (84) September 2017 (98) August 2017 (121) July 2017 (120) June 2017 (94) May 2017 (119) April 2017 (112) March 2017 (117) February 2017 (139) January 2017 (118) December 2016 (89) November 2016 (114) October 2016 (98) September 2016 (91) August 2016 (95) July 2016 (91) June 2016 (73) May 2016 (68) April 2016 (55) March 2016 (100) February 2016 (67) January 2016 (71) December 2015 (73) November 2015 (58) October 2015 (64) September 2015 (81) August 2015 (60) July 2015 (60) June 2015 (52) May 2015 (43) April 2015 (59) March 2015 (57) February 2015 (62) January 2015 (96) December 2014 (22) November 2014 (69) October 2014 (133) September 2014 (144) August 2014 (38)